बाहुनक्षेत्री, जनजाती र दशैं ।
सम्पूर्ण नेपालीहरूमा बडादशैं २०६७ को शुभकामना ः फोटो साभार गुगल
म सानो छँदा दशैं नेपालीहरूको महान पर्व हो भन्ने सुन्ने गर्थे । अलि बुझ्ने भए पछि यसलार्इ हिन्दुहरूको पर्व हो भन्न थालेको सुन्न पाएँ । र, पछि जब पञ्चायत कालमा जन्मेर, बहुदल कालमा माध्यमिक तहको पढार्इ सिध्याएर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक देश नेपालको राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेँ तब आदिवासी जनजातीहरूले यो विशुद्भ हिन्दुहरूको मात्र पर्व भएकाले त्याग्ने प्रचलन नै शुरू हुन थाल्यो । चर्चित समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले त दशैं आदिबासीहरूको पर्व नभएकाले यसलार्इ बहिष्कार गर्नुपर्ने आदिवासी जनजातीको लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् । उनको जिकिर छ, यदि दशैं मान्नेहरूले आदिवासीहरूका चाड पर्वमा सार्वजनिक विदा तथा कर्मचारीहरूलार्इ त्यही अनुरूपको सुविधा उपलब्ध नगराउने हो भने दशैं मान्दै आएका आदिवासी जनजातीहरूले त्यसलार्इ तुरून्तै परित्याग गर्नु उत्तम रहेको समेत विचार व्यक्त गरेका छन् ।यस्ता भनार्इ राख्छन हाम्रा समाजशास्त्री हेर्नुस भिडियो।
म बुझ्ने भएदेखि नै दशैं र तिहारको नाममा हुने लामो सरकारी बिदा र अनावश्यक खर्चको बिरोधमा उभ्भिदै आएको मान्छे हो । बिकट हिमाली जिल्लामा खाध्यन्नको अभावमा छटपटाइरहेकाहरूको ब्यथा रेडियो, टि.भी.मा सुन्न देख्न थालेपछि निधारभर रंगिन चामलको टिका टाँसिने परम्परामा केहि सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ममा शुरू हुन पुग्यो । तर त्यो परम्परालार्इ म बबुरोले परिष्कृत गर्न सक्ने हैसियत पनि राख्न सक्ने थिइँन । तर आज समाज र वरिपरीको वातावरणलार्इ बुझ्न थालेपछि भने ममा दशैंका विषयमा बुझ्ने छुट्टै मान्यता विकास हुन पुगेको छ । दशैं हिन्दुहरूको मात्र महान पर्व हो भने किन सबैभन्दा बढि हिन्दुहरू बस्ने भारतमा दशैं नेपालको जस्तो भव्य हुँदैन । यदि यो हिन्दुहरूको मात्र पर्व होइन भने आदिवासी जनजातिका नाममा यसलार्इ परित्याग गर्नुको के तुक रह्यो ? मलार्इ लागेको छ, कि यसका साँस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलार्इ जोगाएर परिष्कृत गर्दै राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन सकिदैन ? एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भैसकेपछि त्यो देशको आफ्नै एउटा छुट्टै राष्ट्रिय पर्व हुनु जरूरी छ कि छैन ? विश्वमा थुप्रै देशहरू छन् जहाँ क्रिसमसलार्इ राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ त्यही अनुरूप सार्वजनिक विदाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । चाड पर्वलार्इ धार्मीक तथा जातिय नारामा लगेर जोड्नु एक्काइसौ शताब्दिका बौद्भिक मानव प्राणिलार्इ सुहाउने बिषय हैन । दार्जिलिङ्गे प्रोफेसर (जो आफू नै जनजाती हुन) गोपिनारायण प्रधान बताउनुहुन्छ, 'जातियताका नाममा समग्र राष्ट्रको साँस्कृतिक पहिचान गुमाउने गरी गरिने कार्यकलापहरू दुखलाग्दा विषय हुन' यसबाट हामी प्रष्ट हुन सक्छौं कि नेपालमा सदियौंदेखि प्रचलनमा रहेको दशैं पर्वलार्इ हिन्दुहरूको मात्र हो भनी राजनीतिक धुर्ताइँ मात्र गर्न खोजिएको छ । एउटा राष्ट्रिय साँस्कृतिक पर्वलार्इ राजनीतिक रंग दिइएको छ, र केहि दुर्इ चार जना आफूलार्इ आदिवासी जनजातिका ब्याख्यता ठान्नेहरूले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनैतिक स्वार्थपूर्तिका लागि दशैं बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियानलार्इ चलाइएकोमा दुर्इ मत हुनै सकिदैन ।
हुनसक्छ, एउटा कुनै कालखण्डबाट प्रचलनमा आएको साँस्कृतिक पर्वमा केहि त्रुटीहरू अवश्य छन् । त्यसलार्इ हामी सच्चाउने तर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ । तर पुस्तौदेखि दशैं मान्दै आएकाहरूलार्इ रूपैयाँ पैसाको ठूलो विनाश हुने भ्रम फैलाएर तर्साउने काम गर्नु हर हालतमा राम्रो हैन । दशैंसँग जोडिएर आएको कुनै पनि धर्म ग्रन्थले दशैं मनाउनका लागि घरमा खसि ढाल्नै पर्छ भनेको छैन, न त त्यहाँ टिका जमराको साथसाथमा हजारौं नोटका बिटा दक्षिणाबापत दिनुपर्छ नै भनेको छ । दशैंसँग जोडिएको एउटै धार्मिक मान्यता भनेको नै असत्य माथि सत्यको जित हो । तसर्थ परापूर्व कालमा भएको असत्यमाथिको सत्यको जितलार्इ खुशि र हर्षबढाइका साथ मनाउनु पर्छ भनिएको मात्र हो । यसको मूल कुरोलार्इ बंगाएर पछि थपिदैँ आएका उपविषय तथा व्याख्याहरूलार्इ मात्र बिश्लेषण गरि दशैं मनाउनु अनुपयुक्त हो भनि जिकिर गर्नु हर हालतमा उपयुक्त छलफल हुन सक्दैन । यो पर्व भनेको बर्षौदेखि आफन्त तथा परिवारजनसँग छुटिएर बस्न बिवश नेपालीहरूको मिलन हुने सुनौलो अबसर हो भन्ने कुरालार्इ हामीले किन बिर्सदैछौ ? के यो पर्व हजारौंको दक्षिणा लिनेदिने पर्व हो ? कसैको आर्थिक हैसियत त्यो स्तरको छ भने उसले त्यसो गर्नु स्वभाविक विषय हो तर बास्तवमा दशै पर्व त आफ्ना पुजनीय मातापिता तथा नातेदारहरूको हातबाट टिका र जमराका साथसाथमा प्रगति, उन्नती, दिर्घायू र सफलताको आशिरबाद थाप्ने पर्व हैन र ? यसको मूख्य अर्थलार्इ जसरी बंगाएर परिभाषित गरिदै छ, यसले भविष्यका नेपाली पिढीलार्इ पश्चिमा संस्कृतिको दास बनाउने दिशातिर धकेल्दै गरेको तर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्ला कि नपर्ला ?
दशैं पर्व हिन्दुहरूको मात्र पर्व हैन, यसको इतिहास हिन्दु धर्मसँग मात्र जोडिएको हो भन्ने कुरोलार्इ हामीले बुझ्न नसक्दा अहिले यस्तो अवस्थाको सृजना हुन गएको हो । यहाँ समाज पढेका भन्नेहरूलार्इ सामाजिक पर्वलार्इ जातियतामा लगेर जोडेका छन् । यहाँ मान्छेहरूले बुझाउँदै छन् - हिन्दु धर्म बाहुन र क्षेत्रीहरूको मात्र धर्म हो । यसको मूल जड भनेको समाजमा रहेको जातिय भेदभाव तथा थिचोमिचोको कुरितीलार्इ निमिट्यान्न पार्नुको सट्टा त्यसलार्इ जातीय राजनीतिक रंग दिएर सामाजिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउने दृष्टता गर्नेहरूको गलत बुझार्इ नै हो । मेरो बुझार्इको सापेक्षताले शतप्रतिशत विश्वासका साथ भन्न सक्दछ, कि दशैं परित्याग अभियानले आदिवासी जनजातीको साँस्कृतिक पहिचानको ग्यारेन्टी गर्दैन ।
हिन्दु धर्मसँग जोडिएका दुर्इ विश्वप्रसिद्भ व्यक्तित्वहरूको यो भनार्इलार्इ पनि एकपटक मनन गर्ने कि ?
दार्शनिक भोल्टेयर बताउँछन् – "Hinduism is the best gift of the East to the West".
आइरिश नाट्यकार जर्ज बर्नाड शा भन्छन् – "Hindu religion is the most important and the most liberal religions of the world".
कैलाश शर्मा said…
अनि ती प्रबुद्भ समाजशास्त्रीको नाम त हिन्दु देवता कृष्णको परेछ नी ? कि त्यसमा पनि बाहुन क्षेत्रीको हात छ ? तिनलार्इ सोदेर लेख्नपर्यो निराजनजी । फेरी भन्लान न्वारनमा बाहुनले राख्देको ? त्यसो भनेर उम्किन पाइन्न हैं न्वारन पनि त हिन्दु संस्कार हो । तिनले त्यो नाम फेर्नै पर्छ ।
October 16, 2010 at 6:04 PM
पक्कै पनि दसैँ हिन्दुहरुको मात्र न भैकन सम्पूर्ण नेपालीहरुको महान चाड हो र यसलाई सांस्कृतिक रुपमा लिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई !!!
कैलाशजीकै भनाइ साभार गरें है !
अनुत्तरित प्रश्नहरू र नांगा मान्छेहरू
त्यो घरझगडा मात्र थिएन । त्यो मात्र घरझगडा होइन् । यसलाई यस्तरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि तपैंका उन्नत ‘दिमाग’ले मान्दैमा, त्यो घरझगडा नै हो भनेर ठोकुवा गर्नुपर्ने घटना पनि होइन । तर त्यो समाजको दूर्नियती नै यस्तो भैदियो कि तपाइँहरूलाई त्यस्तै लागेपछि धेरैलाई त्यो त्यस्तै नै होला भन्ने भ्रम हुनजान्छ । अनि त समाज केहि सिमीत मान्छेहरूलाई लागेको ‘भ्रम‘ को सति जान्छ । हेर्दा यो यति सामान्य घटना जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यो असामान्य परिघटना नै हो । हुन त कोही समाचार संकलकलाई यस्तो लागिदियो कि सामान्य घरझगडाको कुरा किन संकलन गर्नु ? वित्थामा गाल मात्रै पर्छ । चिनजानको दायरा अलिकति भएपनि किन खुम्चाउनु ? फलानो ठाउँमा काम गर्ने तिलाना सरको मन दुख्न सक्छ, फेरि वहाँसँग चिया पिउँदै रमाइला गफ गर्ने वातावरण बिग्रन सक्छ । आफ्ना स्वार्थका सम्बन्धहरू बिग्रने डरमा हामी कसैको बिग्रेको परिस्थितीलाई नजरअन्दाज गर्छौं । यो के दुर्भाग्यको कुरा होइन ? एक असाक्षर व्यक्तिसँग जोडिएको घटना भएको भए यसलाई सामान्य घटना मान्न सकिन्थ्यो तर राष्ट्रसेवक प्रहरी संगठनको प्रहरी निरीक्षक अझ त्यसमाथि मुद्दा फाँटको अधिकृतसँग ज
एउटा गल्ती, एउटा प्रश्न अनि साइबर जंकीहरू
पहिलो घटना सार्वजनिक हुँदा ती भाइले आफ्नो गल्तीलाई अस्वीकार गरिरहे । सामाजिक संजालमा देखिएका टिप्पणीहरू हेर्दा के बुझिन्थ्यो भने - उनले आत्मालोचित हुनै मानेनन् । यी युवाको वदनियतपूर्ण कर्मसँग एक युवतीको भविष्य जोडिएको थियो । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मनोकांक्षा लिएकी ती गाउँले युवतीले यिनै भाइको विश्वासमा परेर रकम बुझाएकी थिइन - उनी विश्वस्त थिइन् - उनको भर्ना हुनेछ । परीक्षाको फाराम भरिनेछ, परीक्षा दिन पाउनेछु । परीक्षापछि के के गर्ने उनका आफ्नै योजनाहरू थिए हुनन, तर जब परीक्षाका लागि प्रवेश पत्र बुझ्न उनी गाउँबाट झरिन् । क्याम्पसमा पुगेपछि उनका आँशुहरू झरे । आँशुहरूसँगै उनका सपनाहरू पनि भुँइमा पछारिए, ती कम्तिमा पनि एकवर्षका लागि सम्हालिन नसकिने गरी टुक्रेका सपनाहरू थिए । ती गाउँले बैनीसँग आफ्नो गल्तीका लागि उनले माफि माग्न समेत उचीत ठानेनन् । बरू आफ्ना साइबर जंकीका बथान भेला पारेर सामाजिक संजालमा सुनियोजित षडयन्त्रको पाठको रटान लगाइरहे । अहँ उनले सुध्रने अठोट गरेनन् । फेरि अर्को उहि प्रकृतीको घटना बाहिर आएको छ । घटनामा उहि भाइ जोडिन पुगेका छन् । यो घटनासँगै सामाजिक संजाल विशेषगरी